Somali Interpretation Services - Laird Assessors
Adeegyada turjumaada afka ah ee arrimaha sharciyada
Turjubaano ka diiwaan gashan NRPSI oo daboolaya dhamaan luqadaha lagaga hadlo midowga boqortooyada Ingiriiska. Turjubaanadayadu waxay tegi doonaan Maxkamada, Ballamada Caafimaadka iyo ballamada caadiga ah, maanta ballanso Turjubaankaaga shahaadada u haysta turjubaanimada. Read More
Adeegyada Turjumaada qoraalka ah ee arrimaha sharciyada
Waxaanu bixinaa adeeg turjumaad qoraal ah oo si hufnaan iyo xirfad ku salaysan loo diyaariyey oo dhinaca sharciyada ah. Waxaanu u turjumnaa dikumiintiyo kala duwan oo sharciyada la xiriira dadka aanu hawsha u qabanayno mar kastana waxaanu bixinaa shahaado cadayn ah oo aan raacino qoraalka la turjumey taasoo cadaynaysa inay qoraalka turjumtey cid xirfad u leh. Read More
Adeegyada Qoraal Markhaatiyeedka
Kooxdayada khibrada u leh ayaa qoraal markhaatiyeedka oo dhamaystiran u soo diyaariya shirkado badan oo Looyaro ah midowga boqortooyada Ingiriiska oo dhan. Warbixinadayadu waxaay waafaqsanyihiin CPR khubaradayaduna waxay soo qaadaan qoraalo faahfaahsan oo aan waxba laga tegin iyagoo fiiro gaar ah u yeelanaya inay wax kasta faahfaahiyaan. Read More